Twin Seoul iyo xaaladda jirka masaakiinta
トップページ ＞ 言語 ＞ ソマリ語 ＞ Twin Seoul iyo xaaladda jirka masaakiinta
Twin Seoul oo u qaybsan yahay laba siyaabood
dheer ka hor si aad u hesho [3500 yen qiimaynta Free] dhab ah derjada, aad u dhif ah la kulmi karaan Adduun. Twin Seoul kulan oo dhici baraaruga ruuxiga ah ka joogo in, dareenka waa uu kala duwan muuqata sida marka aad la kulanto qof oo kale.
iyo tuuraa ego ah by si kor loogu qaado baraaruga ruuxi ah, by horjeeda ku shubtay oo naftiisa a mataanaha Seoul jacaylka aan shuruud lahayn, qofkii kala horumarka ee marxaladda si uu u noqdo mid ka mid ah waa.
in habkan, waxay keeni kartaa isbedel xaalad jireed. Waxaa u muuqan karaan sidii xanaaqsan waqtiga, laakiin waxa aan ka baran karaa in sababta loo fuliyay isbitaalka. Haddii ay jiraan wax caynkaas ah, waa in aad sidoo kale aqbalaan in habka of baraaruga ruuxiga ah.
kulanka ka dhacaya isbedelka nafta mataano la baraaruga ruuxiga ah in dhacdaa in kulmay
mataanaha Seoul isbedel waxaa inta badan la xiriira
shanta dareeme ?, runtii isbedelka kala duwan ku iman doono xaalladda jireed. Tusaale ahaan, waxaad bedeli kartaa cuntada uu jecel yahay, dareenka wax oo maqal wax u eg ama u leeyihiin hore ka duwan, waxaad bedeli ku saabsan shanta dareeme in kiisas badan oo.
? xaalad jirka iyo in ay jebiyaan dheelitirka ruux
mararka jebin xaalladda jireed iyo dheelitirka maskaxda beddelkaan ah. Sidoo kale waxaa loo gudbinayaa ama cun cun ama si lama filaan ah hurdo la'aan sabab kasta oo aan, waa in la waxa si fiican u arki karaa in xaalad xun ay sabab u tahay baraaruga ruuxi ah. Intaa waxaa dheer, Dari dhuun xanuun iyo xabadka, in kastoo aan cudur, sida dhagahiisa iyo rabitaanka cuntada oo luma ayaa sidoo kale laga yaabaa ama waxa dhacay. Intaa waxaa dheer, sida ama qabtay lallabo ama kabuubyo in gacmaha iyo cagaha, ma aha wax yar u horseedi kara xanaaqsan jidhka oo dhan halkii goobta ee jirka gaar ah. burburkii
? heli baraaruga kundalini dareen la yaab leh oo ah
xaalad jireed miskiinka iyo dheelitirka maskaxda, gaar ahaan Cundari Waxaa la sheegay in la sababa waayo-aragnimo in ka badan laba baraaruga. Ka dhigan tahay in gabax ka sida mas ama masduulaagii waa Kundalini ah, ka chakra in la furo by baraaruga, tamarta iyada oo dhabarta u hesho dareen ah in aan kor uguma gabax ka yahay baraaruga Kundalini.
Kundalini this sababa cudurka kacsiga waxaa lagu magacaabaa Kundalini syndrome, waa wax caadi ah in dunida ruuxiga ah waa in cillad ka waxaa keena kacsiga.
baraaruga ruuxiga ah in uu bilaabo ka iyo
naf mataano ah in tegi kartaa ilaa marxaladda ay baraaruga ruuxi ah la kulmi waa lama huraan ah si ay u maraan habka ah oo laba ka mid noqday. xaaladda jirka Poor in dhacdaa si ay arrintan loo sameeyo, sida in aad aad u socotaan si ay u dhacaan. Qof kasta oo chakra soo maray kundalini a Dadkuna furan, waxaa laga yaabaa in janjeera in uu noqdo xoog.
by socday ay ku soo celiyaan baraaruga ruuxiga ah sida a, si ay u tagaan ilaa hal talaabo masraxa si ay u noqdaan mid si daacad ah jecel nafta mataanaha awood u yeelan doonaan.
By socday inuu ku soo laabto Ri, in ay tagaan ilaa hal talaabo masraxa si ay u noqdaan mid si daacad ah jecel nafta mataanaha awood u yeelan doonaan.